Ukucindezeleka Kokushisa Kuzingulube
Izingulube zigxxila kakhulu ezimweni ezishisa nezesimo sezulu ezibandayo. Amazinga okushisa afanelekayo okumele agcinwe azoxhomeka ekushiseni kwekamelo, umswakama ohambisanayo, iminyaka yengulube, uhlobo, uhlobo lwe-flooring kanye nezindlu. Njengomthetho wesithupha kodwa, izingulube ezikhulile zikhula emazingeni okushisa ezingaphezu kwe-degrees Celsius nangaphansi kwama-degrees celsius angama-30.
Kunzima kakhulu ukuthi izingulube zipholile ngokwabo. Abakwazi ukuthuthumela, babe namapapu amancane uma kuqhathaniswa nosayizi wabo womzimba futhi banamafutha angqimba abenza ukuba bangene emakhazeni. Ukuthuthukiswa kwezidakamizwa kuye kwandisa inkinga, ngokusho kuka-Alltech, okwenza ukuthi izinhlanzi zanamuhla zikhiqize ukushisa kwangaphakathi kuka-30% kusuka ekuphefumuleni nasekusetshenzisweni komzimba kunezingulube ekuqaleni kwawo-1980.
Ukucindezeleka ukushisa kuyinselele enkulu eNingizimu Afrika, ngenxa yezimo zethu zezulu ezifudumalayo, ezizofika ngisho nokufudumala esikhathini esizayo, ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu. Ngakho-ke, abalimi kufanele bacabangele izimo zezulu lapho bafuna ukukhulisa khona izingulube futhi bahlakulele isu lokuvimbela ukucindezeleka kokushisa ngaphambi kokuqala ukulima ngezingulube.
Ukwehluleka ukwenza kanjalo kuyoba nomthelela omubi ekutheni ukondliwe, amazinga okukhula, ukukhiqizwa ubisi okuhlwanyelayo futhi kungathinta ngisho nokukhiqiza, ngokubangela ukungasebenzi. Ukucindezeleka okushisayo kungaholela ekungalingani kwamanzi, okungaholela ekuhuleni nasesimweni esibuhlungu ukufa. Ukucindezeleka okushisa kungenza futhi ingulube ibe yingozi kakhulu ezifweni.
Ama-pigs abathintekile ukucindezeleka ukushisa noma ukushisa kwesibindi uyoba nesilinganiso esiphakeme sokuphefumula futhi ngeke asebenze kancane, ngamanye amazwi, aqhubeke elele phansi, ngomzamo wokwenza amandla amancane futhi aphule phansi. Ngaphansi kwezimo ezinzima bangase babe buthakathaka, imisipha yabo ingaqala ukuthuthumela futhi bangase bahlanza noma banesifo sohudo.
Abalimi ezindaweni zanamuhla basebenzisa ukulawula kwesimo sezulu ukulungisa igumbi lokushisa namazinga omswakama. Uma ungenayo ukufinyelela kulabu buchwepheshe, yakha i-piggery yakho ibe epholile ehlobo ngokusebenzisa ukubeka amasu kanye nokusetshenziswa kwe-insulation. Amapulangwe ensimbi ahlotshisiwe, isibonelo, angafakwa ngamaqabunga noma utshani ukuze unciphise izinga lokushisa. Abalimi bangafaka futhi ama-sprinklers phezulu ophahleni lwezindlu ukupholisa izindlu phansi kwamagagasi okushisa.
Umthelela wohlobo oluphansi kufanele futhi ucatshangelwe, ngezinye izinto ezenza ukushisa okukhulu kunezinye. Ngokwe-Pig Site, ingulube eyi-5 kg ​​igcinwe ngotshani, isibonelo, izothuthuka emazingeni okushisa ephakathi kuka-27 kuya ku-30 ​​amazinga okushisa, kodwa ngo-39 kuya ku-32 zingakushisa uma igcinwe phansi. Ingulube engama-90 kg egcinwe etsheni kufanele igcinwe ku-11 ukuya ku-22 zingalokushisa, kodwa ngo-15 kuya kwangu-24 zingakushisa phuma igcinwe phansi.
Uma izingulube zizokhiqizwa ngaphandle, kungase kube ukuhlakanipha ukukhetha uhlobo olubukhali lwendabuko olukwazi ukubhekana nezimo zezulu ezifudumayo. Amahhashi anezikhumba ezimnyama nawo angasengozini enkulu yokushisa ilanga. Ama-pig agcinwe ngaphandle kufanele abe nokufinyelela komthunzi nendawo yokuhlala. Ama-puddles amadaka ayosiza futhi ukupholisa izingulube phansi futhi unikeze ukuvikelwa okuncane ngokumelene nokushisa kwelanga.
Amahora ambalwa kuphela okuvezwa angase abe nethonya elibi ekukhiqizeni, ngakho-ke izingulube kufanele zikhohliwe ngokushesha ngangokunokwenzeka lapho izimo zezulu ziphakama ngaphezu kwamazinga okushisa okufanele afanele ukugcinwa kuwo. Ukunciphisa izinombolo zezingulube kungasiza futhi, njengoba ukunqwabalala kuzodala isimo.
Izinyathelo kufanele zithathwe ukuze kugcinwe ukudla okudliwayo. I-Alltech iphakamisa ukuthi abalimi balondoloza ukudla okusheshayo, banciphise okuqukethwe kwamaprotheni okudla, sebenzisa amafutha namafutha amandla okusheshayo, ukwandisa inani lomsoco wesondlo noma unike izingulube ezimanzi ezikhukhulayo ukuze zikhuthaze ukudla. Ukudla kufanele futhi kunikelwe ngezikhathi ezipholile zosuku.